Ogaden News Agency (ONA) – Shirweyn oy isugu iman doonaan 6ex qawmiyadood oo ka mid mucaaradka Itobiya iyo kuwa Gobanimadoonka ah
Shirweyn oy isugu iman doonaan 6ex qawmiyadood oo ka mid mucaaradka Itobiya iyo kuwa Gobanimadoonka ah
Posted by ONA Admin	/ September 21, 2013
Shucuubta Etobiya ee maamulka halkaa ka jira uu ku hayo Xadgudubka kala duwan ee Gumaysiga, Dilka, Kufsiga iyo Dhul boobka ayaa shir Wada-tashi ah ku yeelan doona dalka Ingriiska 28ka Bishan Sep. 2013. Shirkan Wada-tashiga ah ayay shucuubta ku kulmaysa oo ka kooban in ka badan 70% shucuubta ku nool khariidada Itobiya kaga wada tashan doonaan siday isaga kaashan lahayn dhibaatada xad-dhaafk ah ee maamuladi xukunka Itobiya iskaga dambeeyay ay ku hayeen shucuubtaa.
Waxaan la iloobi karin inay Itobiya ka mid ahayn dawladihii ka ganacsan jiray Adoonsiga Afrika, iyadoo dad badan oo ka mid ah qawmiyadahan shirka isugu imanaya ay boqortooyadii Itobiya ka iibin jirtay suuqa adoonsiga (Akhri).
Ajendaha horyaala xubnaha shirka isugu iman doona aad ayuu u balaadhan yahay waxaana la rajaynayaa inuu ka soo boxo go’aano waxtar u ah shucuubtaa gumaysiga iyo xaq-duudsiga ku jiray qarniyada. Waxaa laga filayaa inay soo dadajin doonto shirkan ay isugu imanayaan 6ex qawmiyad oo ah laf-dhabarka shucuubta Geeska Afrika , burburinta xaq-darada ay xukuumada Wayaanaha ku hayso shucuubtaa. Waxaa laga rajaynayaa shirka inay ka soo baxaan go’aan iskaashi oo dhex mara shucuubta Oromiya, S.Ogadenya, Sidama, Shakacho, Agnuwak, iyo banishangul.
Shirka wuxuu dhici doonaa Maalinta Sabtida ee 28ka September.
Goobta iyo Goorta waa sida ku xusan warqaddan Ogaysiiska ah. Waxaa aga codsan dhamaan aqoonyahaynka iyo dadweynaha ay arintan sida tooska u qusayso inay ka soo qaybgalaan shirkan wada-tashiga ah.